ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင် မဖြစ်မနေ လုပ်ထားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြင်ဆင်မှုများ - For her Myanmar
ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဘေဘီလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပေါ့…
အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေအတွက် ပျော်ရွင်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးကို ကျန်းကျန်းမာမာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ.. ခုခေတ်မှာ ဆေးပညာတွေ တိုးတက်လာသလို မေမေလောင်း ညီမလေးတို့ကလည်း ခေတ်နဲ့အညီ သိသင့်သိထိုက်တာတွေသိထား ပြင်ဆင်ထားဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား…
ကလေးငယ်လေး ကျန်းမာပြီး ပြစ်ချက်ကင်းဖို့ဆိုရင် ဗီတာမင် သက်စောင့်ဓာတ်တွေ ဖြည့်တင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျန်းမာအောင် ဦးစားပေး လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါဆို အရင်ဆုံး ဘာတွေ လုပ်ထားသင့်လဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
ကိုယ်ဝန်ယူဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်တွေ ကြိုလုပ်ထားဖို့က အရေးကြီးတယ်နော် ညီမလေးတို့… ဒီလို စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်က ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် တချို့သော အလေ့အထတွေ (ဥပမာ – အမျိုးသား ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း) ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အဟန့်အတား ဖြစ်စေသလို ဗိုက်ထဲက ကလေးညှက်တာ၊ ကလေးအသေမွေးတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်အလေးချိန်များနေတာမျိုး၊ သွေးတိုး နဲ့ ဆီးချိုရှိနေတယ်ဆိုရင် ကြိုတင်စစ်ဆေး၊ ဆေးကုသမှု ခံယူပြီးမှသာ ကလေးယူသင့်ပါတယ် ညီမလေးတို့ရေ…
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် လေယာဉ်စီးလို့ရလား?
လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုသာ ရွေးချယ်စားပါ။
တကူးတကတော့ ပြောနေစရာ မလိုဘူးနဲ့ တူပါရဲ့.. ကျန်းမာစေမယ့်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို အာဟာရပြည့်အောင် စားပေးပါ။ အသီးအနှံတွေကို ပိုစားပေးသင့်ပါတယ်နော်… ကယ်လ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ ချိစ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ နောက် အသားဓာတ်များတဲ့ ပဲ၊ အသား၊ အစေ့အဆံတွေကိုလည်း များများစားပေးသင့်ပါတယ်။
ကဖိန်းပမာဏကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ တချို့သော လေ့လာချက်တွေအရတော့ ကဖိန်းဓာတ်များခြင်းက သားပျက်သားလျှောဖြစ်စေပါသတဲ့ ညီမလေးတို့ရေ.. ဒါကြောင့် ကဖိန်းဓာတ်ကို လျှော့စားပါလို့.. ကော်ဖီကြိုက်တယ်၊ ဖြတ်မရဘူးဆိုရင် တစ်ရက်ကို အများဆုံး တစ်ခွက်တော့ သောက်လို့ရပါတယ်။ (မတ်ခွက်နဲ့ တစ်ခွက်တော့ ဖျော်မသောက်သင့် 😛 )
အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
“ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကလေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်” ဒီလိုပြောရမှာပေါ့.. ဆေးလိပ်သောက်ရင် သားပျက်၊သားလျှောတာတွေ၊ လမစေ့ ပေါင်မပြည့်ဘဲ မွေးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ညီမလေးတို့ရေ… အရက်ကတော့ (ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် 😛 ) ပုံမှန်ပမာဏ သောက်မယ် (တစ်ရက်တစ်ခွက်ပဲနော်..) ဆိုရင်တော့ ဘေးမဖြစ်ပေမဲ့ ပမာဏများရင်တော့ အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ.. မသောက်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်..
ဒါတွေအပြင်ကိုမှ နဂိုရောဂါအခံရှိ၊မရှိဆိုတာကို စစ်ဆေးပြီး ရောဂါကို ကြိုတင်ကုသထားတာကလည်း ကိုယ်ဝန်အတွက် စိတ်ချရစေမှာပါ ညီမလေးတို့ရေ…
ကိုယ်ဝန်မရှိသေးခင် ကြိုတင်စစ်ဆေးထားသင့်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့…
၁) လည်ပင်းဟော်မုန်းစစ်ခြင်း( Thyroid Function Test)
၂) သုတ်ပိုးကောင်ရေစစ်ခြင်း( Semen analysis)
၄) ခုခံအားကျဆင်း HIV စစ်ဆေးခြင်း
၅) အသည်းရောင် ဘီ၊ စီ စစ်ဆေးခြင်း
၆) ကာလသား VDRL စစ်ဆေးခြင်း
၇) ဂျိုက်သိုး စစ်ဆေးခြင်း
၈) သွေးအမျိုးအစားစစ်ခြင်း( Blood grouping and matching)
၉) သွေးနီဥပမာဏစစ်ခြင်း( Hb %) စတာတွေပါ ယောင်းတို့ရေ…
ကိုယ်ဝန်မယူခင် သောက်ထားသင့်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကတော့
– Folic Acid 400microgram ကို ကိုယ်ဝန်မယူခင် တစ်လနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်တောင် လျှောက်သောက်ပေးခြင်းဟာ ကလေးငယ် ဦးနှောက်နဲ့ ကျောရိုး မူမမှန်ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
– ကိုယ်ဝန်စရှိခါစကိုတော့ DHA လို့ခေါ်တဲ့ ဗီတာမင်ပါတဲ့ အားဆေးမျိုးကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။
– Vitamin D ကတော့ 10 micrograms လောက်သာပဲ လိုအပ်ပါတယ်။
– ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် လုံးဝမသောက်သင့်တဲ့ ဗီတာမင်ကတော့ VitaminA(Retinol) ပါ ညီမလေးတို့ရေ… တချို့သော ဆေးဝါးတွေကလည်း သွေးထဲမှာ အချိန်အတော်ကြာ ရှိနေတတ်တာမို့ ကြိုတင်ရပ်ထားသင့်ပါတယ်နော်.. ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ အရင်သွားတွေ့လို့ ပြောတာပေါ့..
ကြိုတင်ကာကွယ်၊ ပြင်ဆင်လို့ရတာတွေကို ပြင်ဆင်ရင်း ချစ်စရာ သားသားမီးမီးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့…
ကနျြးမာဖှံ့ဖွိုးတဲ့ ဘဘေီလေး ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ပေါ့…
အိမျထောငျရှငျစုံတှဲတှအေတှကျ ပြျောရှငျရတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးတှထေဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ရငျသှေးငယျလေးကို ကနျြးကနျြးမာမာ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျနိုငျခွငျးကလညျး တဈခုအပါအဝငျပါပဲ.. ခုခတျေမှာ ဆေးပညာတှေ တိုးတကျလာသလို မမေလေောငျး ညီမလေးတို့ကလညျး ခတျေနဲ့အညီ သိသငျ့သိထိုကျတာတှသေိထား ပွငျဆငျထားဖို့ကလညျး အရေးကွီးတယျ မဟုတျလား…
ကလေးငယျလေး ကနျြးမာပွီး ပွဈခကျြကငျးဖို့ဆိုရငျ ဗီတာမငျ သကျစောငျ့ဓာတျတှေ ဖွညျ့တငျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကနျြးမာအောငျ ဦးစားပေး လုပျထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါဆို အရငျဆုံး ဘာတှေ လုပျထားသငျ့လဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျ…
ကိုယျဝနျယူဖို့အတှကျ ဆရာဝနျနဲ့ ဆှေးနှေးပါ။
တကယျတော့ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ ကနျြးမာရေး စဈဆေးခကျြတှေ ကွိုလုပျထားဖို့က အရေးကွီးတယျနျော ညီမလေးတို့… ဒီလို စဈဆေးမယျဆိုရငျတော့ တဈနှဈလောကျကွိုပွီး စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့မြား ကိုယျက ကနျြးမာရေး ခြို့ယှငျးနတေယျဆိုရငျ ဒါမှမဟုတျ တခြို့သော အလအေ့ထတှေ (ဥပမာ – အမြိုးသား ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ ကိုယျတိုငျ ဆေးလိပျသောကျခွငျး) ရှိနတေယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျရဖို့ အဟနျ့အတား ဖွဈစသေလို ဗိုကျထဲက ကလေးညှကျတာ၊ ကလေးအသမှေေးတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျအလေးခြိနျမြားနတောမြိုး၊ သှေးတိုး နဲ့ ဆီးခြိုရှိနတေယျဆိုရငျ ကွိုတငျစဈဆေး၊ ဆေးကုသမှု ခံယူပွီးမှသာ ကလေးယူသငျ့ပါတယျ ညီမလေးတို့ရေ…
Related Article >>> ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ လယောဉျစီးလို့ရလား?
လတျဆတျတဲ့ အစားအစာတှကေိုသာ ရှေးခယျြစားပါ။
တကူးတကတော့ ပွောနစေရာ မလိုဘူးနဲ့ တူပါရဲ့.. ကနျြးမာစမေယျ့၊ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီတဲ့ လတျဆတျတဲ့ အစားအစာတှကေို အာဟာရပွညျ့အောငျ စားပေးပါ။ အသီးအနှံတှကေို ပိုစားပေးသငျ့ပါတယျနျော… ကယျလျဆီယမျ ကွှယျဝတဲ့ နှားနို့၊ ကွကျဥ၊ ခြိဈ၊ ဒိနျခဉျြ၊ နောကျ အသားဓာတျမြားတဲ့ ပဲ၊ အသား၊ အစအေ့ဆံတှကေိုလညျး မြားမြားစားပေးသငျ့ပါတယျ။
ကဖိနျးပမာဏကို ကိုယျဝနျဆောငျတှအေတှကျ သတျမှတျထားတာမြိုး မရှိပါဘူး။ တခြို့သော လလေ့ာခကျြတှအေရတော့ ကဖိနျးဓာတျမြားခွငျးက သားပကျြသားလြှောဖွဈစပေါသတဲ့ ညီမလေးတို့ရေ.. ဒါကွောငျ့ ကဖိနျးဓာတျကို လြှော့စားပါလို့.. ကျောဖီကွိုကျတယျ၊ ဖွတျမရဘူးဆိုရငျ တဈရကျကို အမြားဆုံး တဈခှကျတော့ သောကျလို့ရပါတယျ။ (မတျခှကျနဲ့ တဈခှကျတော့ ဖြျောမသောကျသငျ့ 😛 )
အရကျ၊ ဆေးလိပျသောကျခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။
“ဆေးလိပျသောကျခွငျးသညျ ကလေးကို ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကျပကျြစီးစနေိုငျပါသညျ” ဒီလိုပွောရမှာပေါ့.. ဆေးလိပျသောကျရငျ သားပကျြ၊သားလြှောတာတှေ၊ လမစေ့ ပေါငျမပွညျ့ဘဲ မှေးတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ ညီမလေးတို့ရေ… အရကျကတော့ (ဆေးဖွဈဝါးဖွဈ 😛 ) ပုံမှနျပမာဏ သောကျမယျ (တဈရကျတဈခှကျပဲနျော..) ဆိုရငျတော့ ဘေးမဖွဈပမေဲ့ ပမာဏမြားရငျတော့ အန်တရာယျ ရှိနိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ.. မသောကျတာ အကောငျးဆုံးပေါ့နျော..
ဒါတှအေပွငျကိုမှ နဂိုရောဂါအခံရှိ၊မရှိဆိုတာကို စဈဆေးပွီး ရောဂါကို ကွိုတငျကုသထားတာကလညျး ကိုယျဝနျအတှကျ စိတျခရြစမှောပါ ညီမလေးတို့ရေ…
ကိုယျဝနျမရှိသေးခငျ ကွိုတငျစဈဆေးထားသငျ့တဲ့ စဈဆေးမှုတှကေတော့…
၁) လညျပငျးဟျောမုနျးစဈခွငျး( Thyroid Function Test)
၂) သုတျပိုးကောငျရစေဈခွငျး( Semen analysis)
၄) ခုခံအားကဆြငျး HIV စဈဆေးခွငျး
၅) အသညျးရောငျ ဘီ၊ စီ စဈဆေးခွငျး
၆) ကာလသား VDRL စဈဆေးခွငျး
၇) ဂြိုကျသိုး စဈဆေးခွငျး
၈) သှေးအမြိုးအစားစဈခွငျး( Blood grouping and matching)
၉) သှေးနီဥပမာဏစဈခွငျး( Hb %) စတာတှပေါ ယောငျးတို့ရေ…
ကိုယျဝနျမယူခငျ သောကျထားသငျ့တဲ့ ဗီတာမငျတှကေတော့
– Folic Acid 400microgram ကို ကိုယျဝနျမယူခငျ တဈလနဲ့ ကိုယျဝနျရှိနစေဉျတောငျ လြှောကျသောကျပေးခွငျးဟာ ကလေးငယျ ဦးနှောကျနဲ့ ကြောရိုး မူမမှနျဖွဈမှုကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
– ကိုယျဝနျစရှိခါစကိုတော့ DHA လို့ချေါတဲ့ ဗီတာမငျပါတဲ့ အားဆေးမြိုးကို ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီးသောကျသငျ့ပါတယျ။
– Vitamin D ကတော့ 10 micrograms လောကျသာပဲ လိုအပျပါတယျ။
– ကိုယျဝနျယူဖို့ အစီအစဉျရှိရငျ လုံးဝမသောကျသငျ့တဲ့ ဗီတာမငျကတော့ VitaminA(Retinol) ပါ ညီမလေးတို့ရေ… တခြို့သော ဆေးဝါးတှကေလညျး သှေးထဲမှာ အခြိနျအတျောကွာ ရှိနတေတျတာမို့ ကွိုတငျရပျထားသငျ့ပါတယျနျော.. ဒါကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့ အရငျသှားတှလေို့ ပွောတာပေါ့..
ကွိုတငျကာကှယျ၊ ပွငျဆငျလို့ရတာတှကေို ပွငျဆငျရငျး ခဈြစရာ သားသားမီးမီးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့…
Tags: baby, Health, Pregnant, Preparation